Ndakainangisa pakati pemakumbo ndakamutakura ndokubva ndaiti shweee, akabva ashinyira! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Ndakainangisa pakati pemakumbo ndakamutakura ndokubva ndaiti shweee, akabva ashinyira!
Ndainge ndakugara ndichitenga mu same shop everyday, not because ndomandaifarira asi kuti manga mune mukadzi wandaifarira. Ndakati ndichipiwa change after ndatenga hangu a pie nedrink, ndakabva ndaramba ndakabata ruoko rwavo ndokubva ndati sorry but can I confess, amai munodonhedza musika.
Ndakavaudza kuti musatsamwe, muchindiona ndichiuya kuzotenga kuno mazuva ese its not kuti ndofarira kutenga muno stereki asi kuti ndofarira kutengeserwa nemi, ndikauya musimo muno zviya pamunenge muri off handitenge, plus off yenyu iriko every Tuesday and Friday ndikunyeba here.She smiled and said aiwa hamusi asi kurikuenda nenyaya yenyu ndirikukuona, musati maenderera, inini ndakarorwa!
From there tanga takutaura daily paanenge ari kubasa, sending each other ma whatsapp chats, kana takuyenda kumba tese we cut communication. I used to tell her how beautiful she is and how beautiful she looks kana asina hembe to me and I have a great fantasy of us tichiisana and ndirikuda kuti kana zvichiita tiwane nguva yekuzvizama.
Takaronga kuti auye kubasa paanenge ari off one day then ndokusangana ndokuenda kuma Elephant Lodge yainge iri muTown close to Makombe, ko ndaida kuyenda far from mabas edu otherwise taigona kuwonekwa nevanhu vekubasa vakazonoudza madam kumba.Takaenda paye ndokusvika hedu ko ini ndoita zvandoda kubasa ndakangobuda ndokunosangana nemukadzi uye.
Mukadzi uyu mutsvuku akaita mupfupi bhichana, anegaro rakakura uye ma Hips, kana akamira so beche rinenge rakafuta pamberi apa and mazamu ake akawoma kuti twii kuita semunhu asati amboyamiwa asi atori nevana 3 chaivo.
Apa ane ma lips ekuti ukaaona unotoona mboro yako yakutodyiwa. Anyway, hatina kupedza nguva takangosvika nekutotanga kubatana ndokutanga, kukisana paye, takabvisana hembe tichiita zvekukamburana chaizvo munongoziya zvevanhu vanenge vachibiridzira manakire azvo akatosiyana.
Takakatanurana hembe zvehasha zviya pasina nguva tainge tatova musvo.Ndakamusimudza iye ndobva akochekera makumbo ake kumusana wangu, ndakanangisa mboro ndakamutakura kudaro ndobva ndaiti shweee, ndaiita wekusimudzira iye achidzikira ega mboro ichipinda yese.
Ipapo handingati kukoira asi ndaiita kuzhaka munhu, ndakaenda naye ndokumuzemberesa kumadziro ndakamusenga kudaro apa akaisa maoko ake around my neck and she tried kundikisa masasi asi nemapindiro aiita mboro yaiita kupinda yese, chaaingokwanisa kuita kuchemerera chete mboro irimo and yakagumha chibereko chaicho. Ndakamuzhegedzera nayo ndakamutakura kudaro till ataura ega zvikanzi babe kani usamire kusvira kani, ummm am… ndaku…!
Haana kupedza nguva ndokubva andimbundira zvinesimba achibva atunda. Ipapo ini ndanga ndisati, ndakamudzikisa from kumutakura ndokubva ndamuisa pasi asi akamira takatarisana.ndakasimudza gumbo rake one reku right ndobva ndariisa pamafudzi angu ndokubva ndaipfekera mboro, ndakamukoira ndakamubata kuti asadonha, iye akabva abatirira madziro nemaoko ese ndokuzembera madziro iwayo kuti asadonhe, chaaingokwanisa chete kuita kuchemerera.
dakaramba ndichigumha tunyama tumwe so twaingonaka mukati kati imomo tuchitiza ndichituteera chete, ndakanzwa huronyo hwaakuuya ndokuramba ndichikoira ndakamubatirira zvinesimba ndiye tsaa tsaa tsaa kumutundira mukati kati. Ndakamusiya ndobva ndanozvidonhedza pamubhedha ndokurara nemusana, kuti ndimbofema.
Akauya pandiri nekajira ndokutanga kupukuta mboro, achiipukuta kudaro ndakabva ndanzwa kunaka pamusoro wemboro, kusumudza musoro wangu so wanei mboro yatova mukanwa, she looked at me and said, nxaa mboro inonaka mhani iyi, she continued achiyamwa mboro, haina kutora nguva ndokubva yamira again.
Ndakaburuka pamubhedha ndokumufongoresa akabata mubhedha, rimwe gumbo ndakati arikwidze pamubedha rimwe ndokurisiya pasi, ipapo mboro yainge yakapinda yese ndokumukoira zvebasa, akakoira back apa ndakamubata mashoulders ake and dzimwe nguva ndaimudhonza bvudzi iroro kuti anatsouya kumashure ndinatsomuzhaka nayo.
Takasvirana until ndakunzwa mboro seichasvuuka. Ndakazomuchinja ndokumuisa makumbo pamafudze and beche range ranatsovhurika zvekuti handina kukoira kaviri katatu ndakanzwa waaaaaa waaaaaaaa waaaaaaa huronyo huchizadza chibereko. Time ndoyakazoita shoma asi ndaitoda even zvehusiku hwese naye so we will meet for the second time!
Previous articleDriver akatanga kundiisa zvine speed ndikawona afinyamisa kumeso ndiye aah aaah tsaaa tsaaa!
Next articleMusoro wayo wainge wazvimba uchipenya apa pakati pake painge panunira nekuda kuiswa!